Dawladda Kenya oo Ciidamo Dheeraad ah u dirtey G/w/bari si ay u waardiyeeyaan Isgaarsiinta Gobolkaas. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Dawladda Kenya oo Ciidamo Dheeraad ah u dirtey G/w/bari si ay u...
Dawladda Kenya oo Ciidamo Dheeraad ah u dirtey G/w/bari si ay u waardiyeeyaan Isgaarsiinta Gobolkaas.
Dowladda Kenya ayaa lagu waramayaa in ay ciidamo dheeraad ah geysay xarumaha isgaarsiinta ee ku yaalla gobolka Waqooyi Barri ee dalka Kenya, kaddib markii dhowr jeer oo hore xarumahaasi lagu bur buriyay weeraro ay soo qaadeen Al-shabaab.
Ciidamadan Kenya ay geysay xarumaha isgaarsiinta ayaa loogu talagalay in ay ilaaliyaan Anteenooyinka Shirkadda Safaricom oo dhowr jeer ay Al-Shabaab burburiyeen.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda Kenya ayaa warbaahinta dalka Kenya u sheegay in ciidamadaan ay ilaalin doonaan xarumaha Shirkadda Safaricom gaar ahaan Anteenooyinka oo Al-Shabaab mar kasta oo ay weeraro soo qaadeen si gaar ah u bartilmaameedsadaan.
Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in la diyaariyay ciidamo badan oo ilaalin doona Tuulooyinka hoos yimaada Magaalada Mandera oo inta badan Al-Shabaab ay weerar ku qaadaan.
Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ku hayaan Anteenooyinka isgaarsiinta ee ku yaalla dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari.
Previous articleAl-shabaab oo weerar Toos ah ku qaadey Saldhig Ciidamada Kenya ku lahaayeen Deegaanka Kulbiyoow.
Next articleCiidamada Dawladda Soomaaliya oo Fashiliyey Qarax Miino kuwo dhulka lagu aaso ah.